Sabab yaab leh oo keentay in dowladda Turkmenistan ay baarto musqulaha - Caasimada Online
Home Warar Sabab yaab leh oo keentay in dowladda Turkmenistan ay baarto musqulaha
Sabab yaab leh oo keentay in dowladda Turkmenistan ay baarto musqulaha
Booliiska dalka Turkmenistan ayaa baarayaal u xil saaray in ay waardiye ka hayaan musqulaha shacabka kadib markii sida la sheegay ay shacabka bilaabeen fal dowladda iyo madaxweynaha aad uga caraysiiyay.
Dadka oo ka jawaabaya go’aan dowladda ay dadka ugu qasabtay in ay ku iibsadaan wargeysyada dowladda leedahay ee dalkaas kasoo baxa, ayaa waxa ay bilaabeen in ay saxarada isaga bi’iyaan xaanshiyaha wargeysyada oo inta badan uu ku sawiranyahay madaxweynaha dalkaas Gurbanguly Berdimuhanmedov.
Ma jiro wargeys kasoo baxa dalkaas oo uusan ku xardhanayn sawirka madaxweynaha maalin kasta, taas oo kaaga darane shacabka lagu qasbay in ay iibsadaan.
Booliiska waxa ay sheegeen in qofkii lagu qabta la ciqaabi doono.
Waxa kale oo ay booliiska baarayaan goobaha qashinqubka, halkaas oo haddii laga helo wargeys uu ku yaalo sawirka madaxweynaha qofka keenay qashinkaas la qabsan doono.
Kaliya ma ahan in dadka ay ka mudaaharaadayaan waregsyada iibsigooda lagu qasbay, ee maadaamaa dalkaas yahay dal faqri ah, ma awoodaan in ay iibsadaan waraaqaha saxarada la’iskaga tirtiryo.
Waxaa xitaa jira carruur loo xirxiray in ay garaafeeyeen sawirka madaxweynaha.